Maraykanka oo sheegtay inay Hogaamiye Alshabaab ah ku dileen Duqayn ay Usbuucan gaysteen. – Hornafrik Media Network
Maraykanka oo sheegtay inay Hogaamiye Alshabaab ah ku dileen Duqayn ay Usbuucan gaysteen.
By HornAfrik	 On Sep 1, 2017
Milatariga Maraykanka ayaa sheegtay inay ku dileen Duqayn Hogaamiye Alshabaab ah, mid kalana ay dhaawaceen.
War rasmiya oo ka soo baxay Taliska Maraykanka ee Africa Command lagu sheegay in Duqayntan oo dhacday Khamiistii ay ka gaysteen Meel u dhow Degmadda Baraawe ee Shabeelaha Hoose. Waxaana ay sheegeen inay dileen Hogaamiye Xagjir ah oo Alshabaab ka tirsan, mid kalana ay dhaawaceen, balse ma aysan sheegin Magacyadda Hogaamiyayaashan.
Ciidamadda Maraykanka waxay qaadeen Weeraro badan oo dhinaca Cirka ah, kuwaas oo Bartilmaameedkooda lagu sheegay inay ku beegsanayaan Kooxda Alshabaab, tan iyo wixii ka dambeeyay Markii Madaxwaynaha Maraykanka, Donald Trump uu oggolaaday in la kordhiyo Weeraradda ay Ciidamadiisu ka gaysanayaan Somalia.
Weeraraddii ugu dambeeyay ee Maraykanku ay ka kala gaysteen Jubooyinka iyo Shabeelaha Hoose waxaa lagu laayay Dad Rayid ah oo aan ka tirsanayn Alshabaab, Waxayna Maraykanku sheegeen inay baarayaan Eedaymaha la xiriira inay Weeraradaasi ku waxyeeloobeen Dad Rayid ah.
Xog: Dowladda Somalia oo dhaqaale ku bixinaysa inay jahwareeriso Fadeexada ka soo wajahday Muwaadinka ay Itoobiya u dhiibeen.
Al-Shabaab oo odayaal ku dilay Degmada Ceel-Waaq ee Gobalka Gedo.